Bruno Fernandes oo heshiis cusub u saxiixi doona Kooxda Manchester United, laakiin waa haddii… – Gool FM
(Manchester) 22 Abriil 2021. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester United ayaa heshiis cusub u saxiixi doona Kooxda, laakiin waa kaliya haddii Paul Pogba uu isna mustaqbalkiisa u hibeeyo naadiga.
Bruno Fernandes ayaa mustaqbalkiisa u hibeyn doona Manchester United, laakiin waxaa kaliya haddii uu sidaas oo kala sameeyo Paul Pogba.
Xiddiga khadka dhexe ee reer France ayaa heshiiskiisa waxa uu ku eg yahay sanadka soo socda, taasoo la micno ah in madaxda Man United ay tahay inay iska iibiyaan 28-sano jirkaan suuqa xagaagan si ay ugu soo ceshadaan inta ugu badan lacagtii ay kala soo baxeen ee ahayd 89 milyan oo gini.
Dhinaca kalena Man United ayaa sidoo kale doonaysa in ku guuleysta Koobka Adduunka ay sii haysato oo uu sii joogo, isla markaana ay u ballan qaaddo heshiis cusub.
Xiddiga Man United ee Fernandes oo 26-sano jir ah ayaa lagu soo warramayaa in uu si dhow ula socdo xaaladda Pogba, iyadoo kooxda ay doonayso in ay heshiiska u kordhiso kaddib bilowga fiican ee Old Trafford.
Wargeyska The Sun ayaa warianya in kubbad sameeyaha reer Portugal uu doonayo inuu hubiyo mustaqbalka Pogba, iyadoo labadan ciyaaryahan ay si aad ah u wada shaqeeyaan marka ay garoonka ku wada jiraan.
Man United ayaa la xiriirtay Fernandes oo hordhigtay heshiis cusub oo shan sanadood ah oo uu isbuucii ku qaadanayo 200 oo kun oo gini, waana labo jibaar lacagta uu helayo xilligan.
Dhinaca kale ee Fernandes ayaa ah qorshaha Man United ee suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer ay doonayso inay kula tartanto Manchester City iyo kooxaha kale hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedka soo aaddan.
Kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford ayaa la la xiriirinayey labada ciyaaryahan ee Naadiga Borussia Dortmund ee Erling Haaland iyo Jadon Sancho, maadaama ay doonayaan inay awood dheeri ah ku soo kordhiyaan kooxda, laakiin waxay u badan tahay inay la kulmaan tartan adag.
Pogba qaab ciyaareed aad u fiican ayuu ku jiray intii lagu jiray qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka kaddib markii uu si tartiib tartiib ah ugu bilowday xilli ciyaareedkan, waxa uu caawiye ka ahaa goolal saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay Man Utd ciyaartay horyaalka.
"Erling Braut Haaland kama tagi doono Borussia Dortmund xagaagan" - Michael Zorc